Zim parliament speaker apologises for opposition MPs heckling – The Citizen
Africa 13.9.2018 07:55 am
Zim parliament speaker apologises for opposition MPs heckling
He also reminded the MPs who recently took the oath of office that legislators must act constitutionally.
Zimbabwe’s elected speaker of parliament, advocate Jacob Mudenda, on Wednesday apologised to chief justice Luke Malaba and Zimbabwe Electoral Commission chairperson justice Priscilla Chigumba following their humiliation by opposition members of parliament (MPs).
Mudenda, a Zanu-PF member, was retained as speaker in elections held on Tuesday, where he beat the MDC Alliance’s Paurina Mpariwa.
“On behalf of the parliament of Zimbabwe … I would like to publicly apologise unreservedly to the chief justice, his Lordship Luke Malaba and the chairperson of the Zimbabwe Electoral Commission [Zec], justice Priscilla Chigumba, for the indecorous behavior by some members of the national assembly during the swearing-in ceremony of the presiding officers yesterday,” Mudenda said in a statement.
He also reminded the MPs who recently took the oath of office that legislators must act constitutionally and in the interest of the nation.
Zimbabwe’s govt workers stay home as wages evaporate 15.10.2019
Families survive on one meal in drought-hit Zimbabwe 6.10.2019